Andry Rajoelina / Marc Ravalomanana : Air Force One II, villa Elisabeth, Daewoo, Soalala… -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina / Marc Ravalomanana : Air Force One II, villa Elisabeth, Daewoo, Soalala…
30/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny fividianana ny Air Force One II (60 tapitrisa Dolara, na 900 miliara) tamin’ny alalan’ny volam-bahoaka, ary ny fanomezana ny velarantany midadasika ho an’i Daewoo, ireo no anisan’ny fitaovana goavana teo am-pelatanan’i Andry Rajoelina sy ny mpiara-dia taminy, nentina nanonganana ny fitondrana Marc Ravalomanana ny taona 2009. Teo am-pelatanan’i Marc Ravalomanana irery tokoa ny fanapahan-kevitra nandritra ny fitondrany, ary noheveriny ho fananany manokana ny volam-bahoaka, ny orinasam-panjakana, sns.
Inona indray anefa no nitranga rehefa tonga teo amin’ny fitondrana i Andry Rajoelina? Namidin-dRajoelina ny fiaramanidina Air Force One II. Nambaran’ny HAT tamin’izany fa 25 tapitrisa dolara (375 miliara) no namarotana ity fiaramanidina ity. Tsy fantatra mazava anefa ny nandaniana izany vola be izany kanefa nambara teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey 2009 fa volam-bahoaka. Namidin’ny HAT ihany koa ny vy tao Soalala, izay mitentina 100 tapitrisa Dolara na 1.800 miliara. Tsy hita nanjavonana koa izany vola be izany, nambara fa lany nanamboarana ireo hopitaly manara-penitra (???).
Izao indray koa niampy ny famarotana ny trano fonenan’ny profesora Zafy Albert, ary ny tena mampalahelo tamin’ity indray mitoraka ity dia 59 tapitrisa fmg monja no namarotana azy. Tsy afa-miala amin’ity raharaha iray ity ny filohan’ny HAT, Andry Rajoelina izay tompon’ny fahefana tsy refesi-mandidy nandritra ny Tetezamita, ny praiminisitra Omer Beriziky lehiben’ny governemanta sady lehiben’ny raharaham-panjakana.
Toa hoe tsy nahafantatra mihitsy ny praiminisitra lefitra Reboza Julien fa ny famarotana ny “villa Elisabeth” no nosoniaviny, araka ny angom-baovao. Marina tokoa fa “Saint Antoine IV” no anaran’ilay tany (vakio Triatra nivoaka tamin’ny sabotsy 28 Oktobra 2017). Ankoatra izany, toa hoe noterena ihany koa ity praiminisitra lefitra teo aloha ity hanaiky ny fanendrena azy teo amin’io toerana io. Minisitry ny Rano mantsy i Reboza Julien nialohan’ny naha praiminisitra lefitra azy, nandritra iny governemanta Tetezamita iny.